यूएईमा २७ युवालाई अलपत्र बनाउने मेनपावरको धम्की- म कांग्रेसको केन्द्रीय सदस्य हुँ, के गर्छस्? – PrawasKhabar
यूएईमा २७ युवालाई अलपत्र बनाउने मेनपावरको धम्की- म कांग्रेसको केन्द्रीय सदस्य हुँ, के गर्छस्?
२०७८ कार्तिक १७ गते १६:०६
दुबई । नेपालीमा एउटा उखान छ नि- जो चोर, उसैको ठूलो स्वर। यस्तै ठूलो स्वर अहिले एउटा मेनपावर कम्पनीको देखिएको छ। गत मंगलबार प्रवास खबरले भिजिट भिसाको नाममा २७ नेपालीलाई रोजगारी दिलाउने प्रलोभन दिएको समाचार सम्प्रेषण गरेको थियो।
यूएई पुगेका यी नेपालीलाई प्याकिङमा काम लगाइदिने प्रलोभनमा १ लाख ७० हजारदेखि २ लाख ५० हजारसम्म मेनपावर कम्पनीले असुलेको थियो।